Winky: robot iyi inodzidzisa chirongwa kuvana - TELES RELAY
HOME » TECH & TELECOM »Winky: robot iyi inodzidzisa chirongwa kuvana
Winky: robot iyi inodzidzisa chirongwa kuvana
Heino robot duku shoma, ino nguva yevateereri vevana. Izvi ndekutsanangurira pano vateereri vechidiki kuti vaite purogiramu uye robotics. Anonzi Winky, robot iyi duku yakananga kunze kwechikwata cheEcole Polytechnique.
Heino robot shoma inofanirwa kukumbira kuvabereki vanoda kukudziridza kuvona kwevana vavo. Winky zvirokwazvo irobhoti ine basa rekukurudzira uye kukurudzira vana ve5 kumakore e12 kuburikidza nehuwandu hwemitambo yemitambo. Nenzira iyi, vanogona kuwana zvidzidzo zveuchenjeri hwekuvaka, asi kwete chete.
Winky, iro robot inodzidzisa vana programming
Zvechokwadi, tinoona muhurongwa hwaWinky kuwanikwa kwezvirongwa, asiwo zvebhobhoti. Ndiyo kutanga-up Mainbot iyo yakabva pakagadzirirwa kwedhibhoti iyi yekudzidzisa. Uye iyo inodzidzira inotanga-tanga kare-kare muchigadzirwa, sezvo ivana avo vanofanira kuguma vachikwira Winky.
Vachabatsirwa nedzidziso chaiyo yeZ24 nhanho dzinofanira kuvabatsira zvikuru. Nezvehutano hwehutsika hweWinky, ziva kuti ine bluetooth connection, izwi re detector uye rangefinder.
Winky anopa vana mukana wekugadzira mapurogiramu avo pachavo
Saizvozvowo, Winky yakagadzirirwa nemudonzvo wekufamba, nzeve dzinotenderera, tactical hulls, motokari, hurukuro uye hurukuro inertial uye LED LED 8 × 8 akabatanidzwa mukati mevhisi yakasimbiswa. Uye kukurudzira vana kuti vave nekugadzira Mainbot inopa iyo Winky-Lab.
Inogona kukwaniswa pa smartphone uye tablet. Inopa mukana wekugadzirisa mafungiro akasiyana eWinky. Uye kune vana vanonzwa mweya wevanokudza mune ramangwana, vanogona kugadzira zvavanenge vachiita zvichienderana nehurukuro yemakombiyuta.
Zvimwe makumi maviri zvikumbiro zvatove zviripo. Inosanganisira mutambo wepatato inopisa uye "1, 2, 3 sun". Kana iwe uri kufarira iyi robot yemari uye inofadza iwe unofanira kubhadhara 199 euros kana 99 euro kuburikidza neUlule platform.
Amazon inofunga kushandisa marobhoti kuti ipe mapeji ako
Roomba Yake inoramba ichidanidzira nguva dzose paanovhiringidza
Washington zvino inobvumira mabhoti ekutakura pamigwagwa yayo
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.begeek.fr/winky-ce-robot-apprend-la-programmation-aux-enfants-315856
Iri robot rinokurova muhupenyu chaiyo kana iwe ukatora mutsva muchokwadi chaiyo - Tech - Numerama
Innovation: Ghana inotora kushandisa drones kupa ropa nemishonga